FXShooter EA သုံးသပ်ချက် - အကောင်းဆုံး Forex EA's | ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး | FX စက်ရုပ်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 23, 2020
ပင်မစာမျက်နှာFXShooter EA ၏FXShooter EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အကောင်းဆုံး Forex EA'S | ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး | FX စက်ရုပ် FXShooter EA ၏ 1
စျေးနှုန်း: $ 299 (2 အစစ်အမှန် (သို့) Demo စာရင်းများ၊ အခမဲ့မွမ်းမံမှုများနှင့်ထောက်ပံ့မှုများပါသော BASIC Package)
ငွေကြေးစွမ်း: EURCHF, EURGBP, EURUSD, GBPCHF, GBPUSD, USDCAD နှင့် USDCHF
မှတ်စု: ယခုအချိန်တွင်2၏ FXShooter ကျွမ်းကျင်သူအကြံဥာဏ်အမျိုးမျိုးရှိသည်။
- အခြေခံ:2အစစ်အမှန်သို့မဟုတ် DEMO အကောင့်များ - အခမဲ့မွမ်းမံမှုများနှင့်အဆင်ပြေစွာပံ့ပိုးမှု - ပုံမှန်စျေးနှုန်း - $ 299
- အဆင့်မြင့်4REAL သို့မဟုတ် DEMO အကောင့်များ - အခမဲ့မွမ်းမံမှုများနှင့်ပံ့ပိုးမှု - ပုံမှန်စျေး - $ 450
ဤအစီအစဉ်တွင်ထည့်သွင်းထားသောအကြံပြုထားသောငွေကြေးအတွဲများအတွက် SET ဖိုင်များပါ ၀ င်သည်။
FXShooter EA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - Scalping အတွက်အကျိုးရှိသော Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး
FXShooter EA ၏ တစ်ဦးအလွန်အမြတ်အစွန်းနှင့်အပြည့်အဝအလိုအလျောက်ဖြစ်ပါသည် FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး ရေရှည်တည်ငြိမ်အမြတ်အစွန်းအဘို့။ ဒီ၏ developer များ Forex စက်ရုပ် ဒီကုန်သွယ် algorithm ကိုဖန်တီးနိုင်စေဖို့, နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေခဲ့ကြသည်။
ဤသည်ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးဈေးကွက်ထဲမှာလက်ရှိတဦးတည်းကိုအကောင်းဆုံး automated Forex ကုန်သွယ်ဖြေရှင်းချက် IST နှင့်မြင့်မားပြန်ကယ်နှုတ်တော်မူဖို့ဒီဇိုင်း။ သို့သျောလညျးမွငျ့မားပြန်လာပြီးအတူမြင့်မားတဲ့စွန့်စားမှုလာနှင့်ကျွန်တော်ပုံမှန်အမြတ်အစွန်းရုပ်သိမ်းပေးရန်သို့မဟုတ်အခြားကုန်သွယ်အကောင့်အမြတ်အစွန်းရွှေ့ဖို့ဖြစ်စေအကြံပြုပါသည်။
FXShooter EA ၏ သင့်ရဲ့ Metatrader4(MT4) ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းနေရာ, မန်နေဂျင်းနှင့်ပိတ်ပွဲအရောင်းအပေါ်အပြေး, အာရုံကြောကွန်ရက်များနှင့်နက်ရှိုင်းသောသင်ယူမှုထည့်သွင်း။ အဆိုပါ developer များဟာတည်ဆောက်ရန်အများအပြားဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းကုန်သွယ်ညွှန်းကိန်းများနှင့် filter များလျှောက်ထား FX သေနတ်သမား EA လည်းအများဆုံးရလဒ်အဘို့, ဈေးကွက်ထဲမှာဖွင့်ဖို့ကြိုတင်ဆော့ဖ်ဝဲစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။
အဆိုပါ FX စက်ရုပ်အပေါ်အလွန်မြင့်အနိုင်ရခဲ့မှုနှုန်းရှိပါတယ် EURCHF, EURGBP, EURUSD, GBPCHF, GBPUSD, USDCAD နှင့် USDCHF 15 မိနစ်အချိန်ဘောင်ကို အသုံးပြု. အားလုံးအတွက်။
ဒါကထူးခြားတဲ့ FXShooter EA ၏ သင်အောင်မြင်မြင်ချင်သူကိုကုန်သည်တွေအနေနဲ့ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ကတီထွင်ခဲ့သည်!
FXShooter EA - Forex Trading နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သည်မဟုတ်လော
၏အသုံးပြုမှုကို Make FXShooter EA ၏ နှင့်ရွှေသို့သင်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဖွင့်!
FXShooter EA ၏ - FX အရောင်းစက်ရုပ်များအကြောင်းမကြားဖူးဘူးလား။
မည်သည့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုမပါဘဲလွယ်ကူသောပိုက်ဆံဘာသည် FXShooter EA ၏ အားလုံးအကြောင်းပါ။ ဒါဟာသင်ပြန်ထိုင်အနားယူနှင့်ရိုးရိုးလေး FX ထရေးဒင်းစက်ရုပ်ဟာသူ့ရဲ့လှည့်ကွက်ပြုပါစောင့်ကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ automated Forex မဟာဗျူဟာနှင့်ပရိုဂရမ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစနစ်ဖြစ်ပါသည်။ အ parameters တွေကို, အကြေးခွံနှင့်သင်တို့၏ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာ၏ကန့်သတ်သင်တို့အနားမှာထောက်ပံ့ခဲ့ကြပြီးနောက်, စက်ရုပ်ကျော်ကြာမြင့်ခြင်းနှင့်သင်တို့အဘို့ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာအပေါငျးတို့သကိုင်တွယ်။ ဒီအဖြစ်ကိုကောင်းစွာအခြားအရေးကြီးသောကိစ္စရပ်များပေါ်တွင်သင်၏စွမ်းအင်အာရုံစိုက်နေချိန်တွင်ထိန်းချုပ်မှုယူရန်သင့်အားခွင့်ပြုထားသည်။
အဆိုပါ EA ၏အပေါ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ် 24 /5အမြတ်အစွန်းကုန်သွယ်ခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေ။ သင်ကကို turn off မဟုတ်လျှင်ဒီတော့သင်ကတစ်ခုတည်းအကျိုးအမြတ်ကုန်သွယ်မှုလက်လွတ်မည်မဟုတ်။
ကျွန်တော်တို့ကိုလူသားတွေအတွက်အမတူဘဲ FXShooter Forex စက်ရုပ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုများကငျးမဲ့သည်နှင့်သာလုံးဝ Calculator ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးစွယ်-of-the-ယခုအချိန်တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်မချကြလိမ့်မည် တကယ်တော့ကအချက်အလက်များနဲ့ကိန်းဂဏန်းများ compile ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ရှိတော့မည်ကိုစိုးရိမ်ခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုလမျး၌အရမသွားပါစေလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။
FXShooter EA - ကုန်သွယ်ရေးယုတ္တိဗေဒ၊ တည်ဆောက်ပုံနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များအကြောင်း
FXShooter EA ၏ အမြတ်အစွန်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောတန်ပြန်လမ်းကြောင်းသစ်ရှိ EA သည်စျေးကွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအတိုင်းလိုက်နာနိုင်သောထူးခြားသောယုတ္တိဗေဒနှင့်အတူ။
အဆိုပါ FX စက်ရုပ်ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တယ် EURCHF, EURGBP, EURUSD, GBPCHF, GBPUSD, USDCAD နှင့် USDCHF တစ်ချိန်တည်းမှာအားလုံး။ အော်ဒါတစ်ခုချင်းစီ၏ Takeprofit သည်ထူးခြားသည်။ ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးသည်၎င်းကိုလက်ရှိ FX Market ၏အခြေအနေနှင့်ညှိသည်။
FXShooter EA ၏ Metatrader4(MT4) ပွဲစားများနှင့်သာမက ECN-type အမိန့်များပြည့်စုံစွာအသုံးပြုသောပွဲစားများနှင့်လည်းသဟဇာတဖြစ်သည်။ ဤ Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးသည် 1,000 အများကြီး သုံး၍ 0.1 USD ထက်မနည်းသောငွေပမာဏလိုအပ်သည်။
ပေါ်လစီပြန်အမ်း: ရောင်းချသူသည် 30 ရက်အတွင်းငွေပြန်အမ်းရန်အာမခံချက်ပေးသည်။ အကယ်၍ သင်သည် 30-day ကာလအတွင်းအကြံပြုထားသောချိန်ညှိချက်များကိုအသုံးပြုပါက EA ၏လုပ်ငန်းကိုနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့် 40% ထက်ပိုပြီးကြိုတင်ထုတ်ယူခြင်းမခံရဘဲပြန်အမ်းငွေကိုသင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ သေးငယ်သည့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများဖြစ်လာနိုင်သည်၊ မဟာဗျူဟာအတွက်ပုံမှန်ဖြစ်သည်၊ သူတို့ကအလျင်အမြန်ဖုံးအုပ်သွားလိမ့်မည်။ အခြေအနေအားလုံးပြည့်စုံပါကရောင်းချသူသည်သင့်အားအပြည့်အဝပြန်အမ်းငွေနှင့်မိတ္တူတစ်စောင်ပေးလိမ့်မည် FX ဖိနပ် တစ်ဦးလျော်ကြေးငွေအဖြစ်သင်နှင့်အတူဆက်ရှိနေမယ်။
အစစ်အမှန်ငွေနှင့်ကုန်သွယ်မှုမပြုမီသင့်၏အကောင့်ကိုဖွင့်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ ၎င်းသည်စစ်မှန်သောငွေကြေးအကောင့်ထဲသို့စစ်မှန်သောရန်ပုံငွေများမထည့်သွင်းမီ FXShooter လုပ်ဆောင်ပုံနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေရန်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
FXShooter EA ၏ မယုံနိုင်စရာစျေးနှုန်း, ဆိုလိုသည်မှာသာ $ 299 မှာချက်ချင်းမရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မိတ္တူဖမ်းပြီးမှမစောင့်ကြဘူး!
တရားဝင် FXShooter EA ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ
နေ့စွဲ Start: မေလ 2, 2019
ရက်စွဲကို Start: သြဂုတ်လ 21, 2019
Demo ပွဲစား: IC စျေးကွက်များ
Forex EDGE Pro ကို EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Eros အမြတ်အစွန်း EA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Forex ဦးရေပြားစက်ရုပ် 3.0 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Forex Software များ
Forex ကုန်သွယ် software ကို
Forex Trading ၏ System ကို
FX သေနတ်သမား EA
FXShooter Forex စက်ရုပ်
FXShooter Forex စက်ရုပ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
TSFX EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Z ကို Trader FX EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
FXSHOOTER EA - စွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်မှုအတွက်အမြတ်အစွန်းဆိုင်ရာ Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး - + 23.7% လတစ်ကြိမ်ပြန်လည်စီးဆင်းခြင်း (အစစ်အမှန်ငွေစာရင်းရှင်းခြင်း!) ချစ်ခင်ရပါသော Forex ကုန်သည်၊ သတင်းများ! FXShooter EA ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - အမြတ်အစွန်းရရှိမည့် Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အကြံပေးခြင်းဤနေရာတွင်နောက်ထပ်အချက်အလက်များနှင့်ဆုကြေးငွေများရယူပါ။ တည်ငြိမ်သောအမြတ်အစွန်း။ ဤ Forex Robot ကိုတီထွင်သူများသည်ဤကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ algorithm ကိုဖန်တီးရန်နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားခဲ့ကြရသည်။ ယခုကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးသည်စျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးအလိုအလျောက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအမြတ်အစွန်းများစွာရရှိစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သို့သော်မြင့်မားသောပြန်လာမှုနှင့်အတူမြင့်မားသောစွန့်စားမှုနှင့်လာပါတယ်... ဆက္ဖတ္ရန္